Ururrada Bulshada Rayidka oo soo jeediyay in xal loo helo 16ka kursi ee Deegaan-doorashadoodu tahay Gobolka Gedo. | dayniiile.com
Home WARKII Ururrada Bulshada Rayidka oo soo jeediyay in xal loo helo 16ka kursi...
Ururrada Bulshada Rayidka oo soo jeediyay in xal loo helo 16ka kursi ee Deegaan-doorashadoodu tahay Gobolka Gedo.
Ururrada Bulshada Rayidka ayaa ka shiray doodda daba-dheeraatay ee ka taagan Doorashada 16ka kursi Golaha Shacabka ee Deegaan-doorashadoodu tahay Gobolka Gedo oo ah Goobta labaad ee DG Jubbaland kuraasta ku dooraneyso.
Bulshada rayidka ayaa cod dheer kusoo saartay in xal loo helo khilaafka siyaasadeed si doorasho xasiloon loogu qabto Gobolka Gedo iyada oo laga fogaanayo is qabqabsi, doorashooyin is barbar socda iyo bulshada oo kala fogaata.
Guddoomiyaha Ururrada Bulshada Rayidka Cismaan Shaatax oo goobta ka hadlay ayaa sheegay in ay aad uga xun yihiin khilaafaadka siyaasadeed ee hareeyay kuraasta ka dhiman Golaha Shacabka Baarlamaanka 11aad ee JFS.
“Waxa aan aad uga xun nahay runtii Bulshada Rayidka haddii aan nahay maantana aan idin kaga fadhinaa talooyinkiina kuraaasta dhiman runtii ay hareereeyeen khilaafyada siyaasadeed Dalka ka jira iyada oo aan marna loo fiirineen Dadweynihii kuraastaas lahaa ama Bulshada Rayidka fikirooda aan meesha oolin, haddii Dadkii metali lahaana ay ku kala qaybsan yihiin siyaasadda Dadkii aragtidooda saxda ah soo gudbin lahaa aan heysan fursad, runtii talooyinka aan ku biirin karno arrintaas sidii xalkooda wixii aan ka dhihi karno ka dhahno” ayuu yiri Cismaan Shaatax.
Bulshada Rayidka ayaa ka digtay in khilaafka siyaasadeed uu caqabad ku noqdo Bulshada Gobolka Gedo oo lagu gorgortamayo Wakiilada ay ku leeyihiin Golaha Shacabka Baarlamaanka 11aad JFS, waxa ay soo jeediyeen in la dhageysto talooyinka dadka indheer-garadka ah.
Waxaa muddo taagan is jiidjiidka siyaasadeed ee salka ku haya hab maamulka Doorashada, Jubbaland ayaa ku dooday in aysan tegi Karin Magaalada Garbahaarey oo gacantooda ka maqan, halka maamulka Villa Somalia hoostaga uu diiday in wufuud kala duwan tagaan.
Guddiga FEIT ayaa 14kii April 2022 go’aan ku gaaray in Garbahaarey laga wareejiyo deegaan-doorashada labaad ee DG Jubbaland si loo doorto 16ka kursi, waxa uu u raray Degmada Ceelwaaq ee Gobolka Gedo.
Previous articleGanacsade Falastiini ah oo $30,000 ugu deeqay dib u dhiska suuqa Waaheen
Next articleGaashaanle Muumin: “Wasiirka Arrimaha Dibadda XFS wuu ku degdegay weerarka uu igu eedeeyay”.
Doorashada Kursi Kamid Ah Kuraasta Ku Harsan Hirshabeelle Oo Ka Dhacday...